Home Wararka Ciidamada Kenya oo duqeyn ka geystay qaybo kamida Gobolka Gedo
Ciidamada Kenya oo duqeyn ka geystay qaybo kamida Gobolka Gedo
Sida ay sheegyaan Wararka naga soo gaaraya Gobolka Gedo ayaa sheegaya in ugu yaraan labo ruux oo rayid ah lagu diley duqayn dhanka cir ah oo xalay ka dhacday deegaanka Ceel-Cade ee gobolka Gedo.
Inkastaa oo aan wali la xaqiijinin hadana Duqaynta oo loo malaynayo in ay gaysteen diyaaraha dagaalka dalka Kenya ayaa haleeshay qoys xoolo dhaqato ah, waxaa halkaa ku dhintay hooyadii iyada ilmo yar iyadoo ay ku dhaawacmeen 5 caruur ah oo ay dhashay.
Deegaanada duqeynta ay ka geysteen ciidamada Kenya ayaa waxaa ka mid ah Ceelcade, Likooley , laheley, Warburay, Burcaleen, Dhamase, Wargaduudo, Qulqul shubaal, Balanbaal, Muudale, Abroone, Buusaar, Qows qurun & Darusalam iyo qaar kale.
Waxaa laga cabsi qabaa in tirada dadka wax ku noqday duqeyntan ay intaa ka badan tahay.
Duqayntan ayaa waxaa ay ku soo beegmeysa xilli xiriirka labada dowladood ee Soomaaliya iyo kenya uusan wanaaganayn.
Ciidanka Kenya ee qaybta ka ah howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa goboladda Jubooyinka iyo Gedo ka gaysta duqaymo aysan u aabayeellin maadaama ay dhowr mar oo hore ay duqayn ku dileen dad xoollo dhaqo ah.
Previous articleBam-gacmeed xalay lagu weeraray bar-kantarool oo ku taalla magaalada Kismaayo
Next articleTaliyihii ururka 6aad ee Gor Gor oo lagu dilay dagaal
Madaafiic iyo hubka fudud oo lagu weeraray degmada Awdheegle
Labada Aqal oo si wadajira u ansaxiyay Sharciga doorashooyinka dalka